မြစ်ဆုံ: ၀မ်းသာရမည်လော ၀မ်းနည်းရမည်လော
အချိန်က 12 ထိုးခါနီး ပုံမှန် အတန်းနားချိန်ရောက်နေသော်လည်း ဆရာမ မှ မေးခွန်းများပေးကာ အဖြေရှာဖို.ပြောနေ၏။ အတန်းခေါင်းဆောင် ကျွန်တော် နာရီကို ဆရာမ မြင်အောင် ကြည်.လိုက်သည် ။ သို.သော် ကံဆိုးစွာဖြင်. ဆရာမ မမြင်လိုက်ဘဲ စာကို ဆက်သင်နေပါ ၏။ ပုံမှန်ချိန်ထက် ၁၅ မိနစ်ခန်.ကြာလာတော. မနက်ထည်းက ထမင်းကြော် တစ်ပန်ကန် ကမန်းကတန်းစားခဲ.သော ကျွန်တော်ဗိုက်က ဆန္ဒပြလာတော.သည်။ အတန်းတူ သူငယ်ချင်းများလည်း ထိုနည်းအတိုင်း ဖြစ်မည်ဟု ထင်မိပါ၏ ။ ကျွန်တော်.ကို ထိုးကြည်.လာကြသော သူငယ်ချင်းများ၏ အရိပ်အကဲကို သိရှိထားသော ကျွန်တော် ဆရာမ ကို လျှင်မြန်စွာပင် အတန်းခနဖြုတ်ပေးဖို. တောင်ဆိုလိုက်ပါ၏။ ဆရာမ သူ.နာရီကို တစ်ချက်ကြည်.လိုက်ပြီး တပည်.ကျော်များကို အမြဲနားလည်သူ ပီပီ လှလှပပ ပြုံးလိုက်ပြီး အတန်းချိန်ဖြုတ်ဖို.ခွင်.ပြုလိုက်လေ သည်။ ထိုသိုသော အခါမှ သက်ပြင်းများ ပြိုင်တူ ချမိကြသည်။
ကော်ဖီဘားရှေ.တွင် သူငယ်ချင်းများ ရိက္ခာကိုယ်စီဖြင်. ဗိုက်ထည်းက တိုက်ပွဲအတွက်အား ဖြည်.ရင်း စကားစမြည်းပြောဆိုနေကြသည်။ -- ဒီနေ. မြန်မာနဲ.ဘင်္ဂလားဒေ.ရှ် ရေပိုက်နက် ပြဿနာ ဆုံးဖြတ်မယ်. နေ.ဘဲ ------တို.မြန်မာနိုင်ဖို.များပါတယ်-- သတင်းတွေဖတ်ကြည်.တော. နိုင်ငံခြားသား ပညာရှင်တွေငှာရမ်းပြီးတောင် ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖို.လုပ်နေတယ်လို.ကြားထားတယ်---- အေးကွာ တို.အားလုံးလည်း နိုင်ဖို.မျှော်လင်.ကြတာဘဲ -----ကိုယ်စီ အတွေးများဖြင်.---- အတန်းထည်းသို. ဒုတိယအချိန်စာဆက်သင်ဖို. ၀င်လိုက်ကြသည်။
နောက်ဆုံး စာသင်ချိန် ပြီးဆုံးသွားပြီး အဆောင်သို. ပြန်ရောက်ချိန်မှာတော. ၀မ်းသာဖွယ်သတင်းကို စပြီးကြားရသည်။ ရေပိုက်နက် သတင်းမဟုတ်ပါ ။ လွှတ်တော်တွင် တင်ပြပြောဆိုနေကြသော လစာတိုးရေးကိစ္စ ဖြစ်ပါသည်။
ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာန ရုံး၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၀၀/ ၂၀၁၂)ဖြင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား အပိုထောက်ပံ့ကြေးအဖြစ် ကျပ် ၃၀၀၀၀ ကိုခံစား ခွင်.ပြုလိုက်သည် ဟူသော ၀မ်းမြောက်ဖွယ် သတင်းဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှာလည်း နိုင်ငံ.၀န်ထမ်း တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အဖေအပါအ၀င် အမျိုးအများစုမှာလည်း နိုင်ငံ.၀န်ထမ်းများ ဖြစ်ကြသောကြောင်. အထူးပင် ၀မ်းသာကြည်နူး မိပါသည်။
အခြေခံလစာနည်းပါသော နိုင်ငံ.၀န်ထမ်းများ အတွက် ဒီသတင်းကတော. ရွှေသတင်းပါပင်။ လစာတိုးသည်.အကြိမ်တိုင်း ဖြစ်လေ.ကျရှိသည်. ကုန်ဈေးနှုန်းတက်ခြင်းပြဿနာကို ထိန်းချုပ်နိုင်မည် ဆိုပါ
က ပြည်.သူဝန်းထမ်းများအားလုံးအပါအ၀င် ၀န်ထမ်းမဟုတ်သော မိသားစုများလည်း တည်ငြိမ်နိုင်ပါမည်။ ထိုသို.မဟုတ်ဘဲ ကုန်ဈေးနှုန်းများ ပိုမိုမြင်.မားသွားပါက ၀န်ထမ်းမဟုတ်သော မိသားစုဝင်များအတွက် အခက်အခဲများစွာ ဖြစ်လာမှာ အမှန်ပါ။ သင်.တင်.လျှောက်ပါတ်သော အခွန်စနစ်ဖြင်.သာ လစာတိုးသွားခြင်းကို ကုစားပေးပါက ငွေဖောင်းပွမှုလည်းမ ဖြစ်ပေါ်နိုင်မည် ဟု ယူဆမိပါသည်။
ထိုသို.သော ၀မ်းမြောက်ဖွယ် သတင်းကို ကြားပြီး အချိန်အနည်းငယ် အကြာမှာတော. အင်မတန်ဝမ်းနည်းဖွယ် ယူကျုံးမရသည်. သတင်းကို ကြားသိလိုက်ရသည်။ နိုင်ငံ.ကိုယ်စားပြု ဘောလုံးပွဲ ရှုံးတာကဂုဏ်သိက္ခာသာပေးဆပ်ရပြီးယခုတွင်တော.ပိုင်နက်ပါ ပေးဆပ်လိုက်ရပြပီ။ ဂိုးသမားညံ.၍ မဟုတ်သလို နောက်တန်းလည်း မပေါက်ခဲ.ပါ။ ပင်လယ်တီ အပေးခံရပြီး ဂိုးသွင်းခံလိုက်ရချိန်မှာတော.
ပြည်တွင်းမတည်ငြိမ်မှု ၏ အကျိုးဆက်ဟု သာ ကျွန်တော်အပြစ်တင်ခြင်တော.သည်။ ၀ါးအစည်းပြေသလို ကိုယ်ထင်သလို အယူဝါဒတွေ ကျင်.သုံးပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာခဲ.သည်တိုင် မပြီးဆုံးသေးသည်.တိုက်ပွဲများအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးဟူသော အလွန်တန်ဖိုးရှိသည်. ဝေါဟာရလေးအတွက် အဖက်ဖက်ကြိုးစားနေချိန်မှာ ပင် ကျွန်တော်တို. စော်ကားခံလိုက်ရပြီ။
ကမ္ဘာ.အသိအမှတ်ပြု တရားရုံးတော်ကြီး ပညာရှင် တရားသူကြီးများကို ကျွန်တော်တို. စောဒက တက်၍ကော ရအုန်းမည်လော။ ကြိုးစားပြီးတည်ဆောက်နေသော မြန်မာ.ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်း ၊ အိမ်နီးချင်းကောင်းပီသမည်ဟူသော ရပ်တည်ချက်တို.ကို သွေဖယ်၍ကော ရနိုင်မည်လော။
လွတ်လမ်းရေး ရပြီးခဲ.သည်.တိုင် လွတ်လပ်စွာ မသွားလာနိုင်သေးသော ပြည်သူတို.အတွက် ကြိုးစားကာကွယ်သက်စွန်.နေသော တပ်မတော်၊ အိမ်တွင်းရေး ပြဿနာကိုသာ အဓိကထားဖြေရှင်းနေခဲ.ရသော တပ်မတော် ကို အပြစ်တင်မည်လော ။
ကျွန်တော်တို. မြန်မာလူမျိုးတစ်ရပ်လုံးအတွက် နားကျည်းစရာ သင်ခန်းစာတစ်ရပ်ပါ။ ကိုယ်.အချင်းချင်းမတည်.အောင် အမြဲသွေးထိုးနေကြသော သူများ ဘာတွေပြောကြအုန်းမည် သနည်း။
ပိုက်ဆံသာ ရမည်ဆိုပါက ရိုဟင်ဂျာ ကိုပင် တိုင်ရင်းသာလူမျိုးများစာရင်းသို ထည်.တတ်သော သူများ က ကျွန်တော်တို. ရွှေဟု တင်စားကြသော ရွှေမြန်မာတွေကိုယ်တိုင်ပင်။
နွားကွဲ၍ ကျားဆွဲ သွားခြင် ဟုလည်း အမည်မတပ်ခြင်းက မြန်မာသည် နွားမဟုတ်ပါ ဘင်္ဂလားဒေ.ရ်ှသည်လည်း ကျားတစ်ကောင်ကဲ.သို. တင်စားဖို. မလိုပါ။ သို.သော် ထင်းစည်းကို ချိုးပါက မရနိုင်ပေသော်လည်း ထင်းတစ်ချောင်းခြင်းကို ချိုးပါက ခွန်အားအနည်းငယ်စိုက်ရုံမျှဖြင်. ကျိုးမှာအသေအချာပါ။ မြောက်ပိုင်းက ညီအစ်ကိုတွေ တည်.အောင် ၀ိုင်းဝန်းဖြေရှင်းပေးနေသောအချိန်
ခြံစည်းရိုးကို ပြောင်းစိုက်ခြင်း ခံခဲ.ရသည်။
ဒီလိုသာ ဒီမိုကရေစီ ဒီမိုကရေစီ လူ.အခွင်.အရေးကွ ဟူ၍ နာမည်ကောင်း တပ်ပြီး ကချင်ကတစ်မျိုး၊ ရှမ်းကတစ်ဖုံ၊ ကရင်ကတစ်မူ ၊ကယားကတစ်ခြား ကဲ.သို. ကိုယ်.မြင်း ကိုယ်စိုင်း ဘယ်ပဲရောက်ရောက်သွားနေပါက ကမ္ဘာမပျက်သေးခင် မြန်မာ.မြေပုံပျောက်လိမ်.မည်။
Posted by မောင်မောင် at 00:57
nice post bro. i am so sad about this case.
မောင်မောင်ပြောတဲ့သတင်းဖတ်ပြီး ဝမ်းသာခြင်းနဲ့တစ်ပြိုင်တည်း စိတ်မကောင်းခြင်းလည်း
ဖြစ်မိပါတယ်။ အထင်နဲ့လက်တွေ့ဟာ မမျှော်လင့်ပဲ အခုလိုလွဲတတ်ကြပါတယ်။
စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာနဲ့ လာဖတ်သွားတယ်ဗျာ။ မနက်ကတည်းက ဒီသတင်းကြားတာ။ စိတ်ညစ်တယ်ဗျာ။ စိတ်လည်းပျက်မိပါရဲ့..... :(
ဟုတ်တယ်အစ်ကိုရာ.. ကျွန်တော်တို့ ညီအစ်ကိုတွေပေါက်ကွဲနေတာ အစ်ကိုကြားမယ်ထင်ပါတယ်. ။ ငိုတဲ့သူကငို.. ကြိမ်းတဲ့သူက ကြိမ်းနဲ့....။
ကွက်ပြီး ဓါးနဲ့လှီးယူ သွားတာနော်
ကိုဖြစ်ဆုံရေ ထပ်တူ ၀မ်းနည်းခံစားနေမိပါတယ်...
အောက်ပါလင့်ခ်ကို ဖတ်ကြည့်စေလိုပါသည်။ တာဝန်ရှိသော လူကြီးများလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားခဲ့ပြီး ဖြစ်သည် ဟု ယူဆ ပါ၏။ မည်သူ့ကိုမျှ အပြစ်တင်ဖွယ် မရှိပါ။ http://doctorsatephwar.blogspot.com/2012/03/blog-post_15.html?spref=fb
ကိုမြတ်ကိုရေ ကျေးဇူးပါဘဲ ခုမှ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိရတော.တယ်ဗျာ။
အဲ့ကိစ္စကို ဆိုးရွားလွန်းပြီး ခံပြင်းဖို့ လည်းကောင်းလှပါတယ်